FSX Amphibian Prototype Stingray
Fampidinana: 6,883 alaina 914,325 fotoana.
FSX Amphibian Prototype Stingray NEW
FSX Amphibian Prototype Stingray repaint sy tontonana vaovao. Kitapo 2D hosodoko vaovao sy vaovao ho an'ny prototype amphibian Stingray avy amin'i Simon Smeiman. Ity add-on ity dia manome tontonana fitaovana 2D perspectivic, fakantsary namboarina ary firafitra vaovao miloko mavo misy tadiny mavo. Panel, fanamboarana ary fandokoana an'i Erwin Welker.
Anaran'ny fisie stingraypro-repaint_2dpanel.zip